Mapurisa Anopa VaChamisa Mvumo Yekuita Mabiko
Mapurisa emuKuwadzana azopa mumiriri wenzvimbo iyi mupararende, uye vari mutauriri weMDC inotungamirirwa naVaTsvangirai, VaNelson Chamisa, mvumo yekuti vaite mabiko avo neMugovera ekupemberera kubudirira kwavo muzvidzidzo zvavanga vachiita paUniversity of Zimbabwe.
Mapurisa akambenge anyima VaChamisa mvumo vachiti mabiko aya aizoshandiswa semusangano wezvematongerwo enyika. Asi mapurisa azoshandura mwoyo akapa VaChamisa mvumo yekuti vaendrere mberi, asi pasina anotaura zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Mabiko aya achaitirwa yepaKuwadzana 2 Hall makare muKuwadzana. VaChamisa ndivo vakakwanisa kuve shasha mutungadzose muzvidzidzo zvedegree rePolitical and Administrative Studies paUniversity of Zimbabwe, uye vakapihwa nyembe dzavo nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mwedzi wapera.
VaChamisa vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti havasi kuzotevedzera zvatarwa nemapurisa izvi, sezvo pose panosangana vanhu pachikurukurwa zvinenge zvichinetsa munyika, kusanganisirawo zvematongerwo enyika.